Farmaajo oo maalintii labaad Ciidanka u daad-gureeyay Gedo | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo maalintii labaad Ciidanka u daad-gureeyay Gedo
Waa tallaabo halis leh oo keeni karta dagaal ka dhacay Gobolka, oo horey dhibaatooyin badan uga jireen.
DOOLOW, Soomalaiya - Waxaa degmada Doolow gaarey Ciidamo kale oo diyaarado looga qaadey Muqdisho, kuwaasoo wata hub culus iyo gaadiidka dagaalka.
Askartan oo lagu tababaray xerada TurkSom oo ku taalla degaanka Jazeera ee duleedka Muqdisho ayaa katirsan guutada Gor-Gor, waxaana amarka lagu geeyay Gedo bixiyay Farmaajo.
Maalintii shalay Ciidan aad u badan ayaa laga dejiyay Doolow, oo looga sii qaadey dhanka Beled-Xaawo oo dhawaan Jubbaland lagala wareegay, waxaana socda isku dayo uu sameynayo Farmaajo oo awood military ku qabsanayo dalka.
Sanadkii lasoo dhaafayay ayay billaabatay daad-gurenta Ciidanka ee gobolka Gedo, oo hadda noqday xukunta khilaafka doorashadda maadaama ay isku hayaan Farmaajo iyo Axmed Madoobe doorashadda Xildhibaanada 16-ka kursiga ee Garbahaarey.
Gedo waxaa ka jira xiligan abaaro iyo biyo la'aan xooggan, iyadoo ay u dhinteen dad badan gaajo iyo oon/haraad, iyadoo halkii dowladda Soomaaliya laga sugayay gargaar bini'aadanimo u dirtay Ciidan, sidoo kalena hurinaysa Colaad.
Jubbaland ayaa cambaareysay go'aanka Farmaajo Ciidamada ku geeyay Gedo, iyadoo qoraal kasoo baxay Xafiiska Axmed Madoobe lagu sheegay inuu Madaxweynaha mudo-xileedkiisu dhamaaday uu qaadi doono mas'uuliyadda colaadda uu hurinayo.